आजदेखि सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढ्यो !
काठमाडौं : सरकारले आजदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारी साधनमा देशभर लागू हुने गरी नयाँ भाडादर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मनत्रालय मातहतको यातायात
व्यवस्था विभागले देशभर नयाँ भाडादर कार्यान्वयमा आएको जनाएको छ । विगतमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर निर्धारण गर्दा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सू’चकको अंश ६५ प्रतिशत मानी निर्धारण गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
हाल पेट्रोल र डिजलको मूल्यसमेत वृद्धि भएको छ । भाडा निर्र्धारण गर्दा अन्य सू’चकलाई यथावत राखी ‘क्याल्कुलेसन चार्ट’ मा इन्धनको सू’चकलाई मात्र हालको मूल्यको आधार लिई प्रचलित भाडादरमा वृद्धि गरिएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।
भाडादर समायोजन गर्ने निर्णयअनुसार आजदेखि लागू हुने गरी भाडादर स’मायोजन गरिएको विभागले स्पष्ट पारेको छ । त्यसमा छोटो, मध्यम र लामो दूरीको छट्टाछुट्टै भाडादर कायम गरिएको छ ।
नयाँ भाडादर अनुसार काठमाडौँबाट इलाम जाने यात्रुले रु एक हजार ६९१ भाडा तिर्नुपर्नेछ । काठमाडौँ काकडभिट्टा जानका लागि रु एक हजार ४७० भाडा लाग्ने भएको छ ।
विभागले देशभरका कूल २८६ रुटको भाडादर समायोजन गरेको छ विभागले यात्रुबहाक सवारीमा २८ प्रतिशत, पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालबहाक सवारी साधनमा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारमिा २६ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको छ ।
२०७८ आश्विन ९, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 70 Views
नेपालमा खेर गइरहेको बिजुली बंगलादेशले खरिद गर्ने !
पे’ट्रोलियम पदार्थले भार थोपर्यौ, वि’द्युतीय सवारीको प्रयोग गरौँ : राष्ट्रपति भण्डारी
भारतलाई विजुली बेचेर दुई हप्तामै नेपालले कमायो ६ करोड भन्दा बढी !